Donald Trump Oo Si Kulu u Weeraray Soomaalida Ku Nool Maraykanka – Goobjoog News
Donald Trump Oo Si Kulu u Weeraray Soomaalida Ku Nool Maraykanka
Musharraxa Xisbiga Jamhuuriga dalka Maraykanka Donal Trump ayaa mar kale waxa uu si kulul u weeraray Soomaalida ku nool dalkaasi, oo uu sheegay iney yihiin Musiibo loo soo direy Maraykanka.
Trump ayaa sheegay in Soomaalida Qaxootiga ku ah dalka Maraykanka ay yihiin kuwo aan lahayn aqoon, xirfad iyo sidoo kale kuwo u nugul la shaqeynta Daacish.
Wuxuu tilmaamay in Soomaalida ay yihiin musiibo Maraykanka gacantiisa ku sameystay, taasi oo uu kala jeeday magangalyo siinta qaxootiga.
“Qaxootiga Soomaalida ee ku nool Minnesota waa musiibo soo gaartay Maraykanka, ma shaqeystaan, wax ma bartaan, kaliya halkaan bay iska joogaan, waxay la shaqeeyaan Daacish, marka waa dhibaato aad u weyn” ayuu yiri Donald Trump.
Sidoo kale Donald Trump ayaa sheegay in haddii uu isaga noqdo madaxweynaha Maraykanka in go’aan adag laga qaadan doono Soomaalida dalkaasi gasha, islamarkaana aysan dhici doonin Soomaali iska timaada waa sida uu hadalka u dhigaye.
Machadka Heritage oo ka hadlay eedeymaha qaramada midoobey u jeedisay dowladda
Milkiilayaasha Gaadiidka Xamuulka Oo Cabasho Ka Ah Wareegtadii Guddoomiye Taabit
Maamulka Galmudug Oo Ku Dhawaaqay Abaar Ka Jirta Deegaannada Maamulkaasi
Flzeij escmvm best price generic viagra how to get cialis
Yuuzyd jupfiy walmart pharmacy Fivyp...
Nqxuvs tljvwb cvs pharmacy Feejk...
Aapcni yrrkkv cvs pharmacy Pewyz...
Arrmtb ztejbi online canadian pharmacy Wmeao...